About Us - Shandong Gangting Dianche Co.Ltd
High Food Truck
Small Food Truck
Ice Cream ny hovidiana
Big Ice Cream ny hovidiana
Hand manosika Ice Cream ny hovidiana
Motocycle Ice Cream ny hovidiana
Small Ice Cream ny hovidiana
Big Vending Trailer
Samy Side Open Trailer
Voankazo Sell Vehicle
Amin'ny hery RV
Raha tsy misy Power RV
Magic sakafo fiara, izay avo-teknolojia orinasa misahana manokana ny amin'ny famolavolana, fampandrosoana, ny famokarana ny varotra sy ny raharaham-barotra fiara.
Ny orinasa momba R & D sy ny fanavaozana ny fototra toy ny fifaninanana, ka efa naorina tsara R & D sy ny famolavolana ekipa, mifantoka amin'ny faharanitan-tsaina, automatique, specialization, sy fanatsarana.
Tsy mikiry mahaleo tena fanavaozana. Ny orinasa efa nahazo mihoatra ny 100-pirenena sehatra teknolojia Patents, manome finday manokana vahaolana ho an'ny mpanjifa fivarotana zavatra ilaina, ary manampy ny mpanjifa hanorina orinasa vaovao filozofia.
Ny orinasa dia matihanina mpanamboatra ny toeram-pivarotana finday manokana. Manarona ny vokatra am-polony maro ny karazana toy ny sakafo haingana-kamiao, isan-karazany gilasy sarety, isan-karazany ny mofo sarety, fanentanana ara-barotra fiara, Studio fiara, ary ny hatsaran-tarehy fantsika fiara.
Ny raharaham-barotra manarona tsakitsaky, zava-pisotro eny an-dalana, fanentanana, fitaovana herinaratra, furnishing an-trano, akanjo orinasa, hatsaran-tarehy makiazy orinasa, orinasa trano fonenana, ny fizahan-tany sy ny orinasa hafa. Ny vokatra dia naondrana tany Etazonia, Korea Atsimo, ny Vondrona Eoropeana, ny Afovoany Atsinanana sy ny hafa firenena Aziatika sy Eoropeana sy ny faritra.